Igwe a na -edepụta aha, igwe na -akwakọba akwa - UBL
Anyị na -enye nkwalite dị elu
Ọrụ akụrụngwa 1. Usoro ihe eji eme ihe a bụ nke ụdị FC-M152A bụ isi, nke enwere ike iji tụgharịa uwe aka ekpe na nri ozugbo, na-agbatị ogologo otu ma ọ bụ ugboro abụọ, na-enye akpa rọba akpaka na akpaaka. 2. Enwere ike ịgbakwunye ihe ndị na -arụ ọrụ dị ka ndị a: akụrụngwa akara akpaaka na -akpaghị aka, gluu akpaka na -adọba ihe akara, ihe nchịkọta akpaka. 3. Akụkụ nke ọ bụla nke Equ ...
Ọrụ Akụrụngwa 1. Usoro ihe eji eme ihe a bụ nke ihe nlereanya bụ isi FC-M412A, nke enwere ike iji tụgharịa uwe aka ekpe na aka nri otu ugboro, tụgharịa ogologo oge otu ma ọ bụ ugboro abụọ, na-enye akpa rọba akpaka na akpaaka. 2. Enwere ike ịgbakwunye ihe ndị na -arụ ọrụ dị ka ndị a: akụrụngwa akara akpaaka na -akpaghị aka, gluu akpaka na -adọba ihe akara, ihe nchịkọta akpaka. 3. Akụkụ nke ọ bụla nke ...
Uwe nchedo Uwe mwụda mpịachi igwe na -akwakọba akụrụngwa akụrụngwa ③. Emebere akụkụ ọ bụla nke akụrụngwa dịka ọsọ chọrọ 600PCS /H. Ngwakọta ọ bụla nwere ike nweta ọsọ a na ọrụ niile. . Ntinye ntinye nke ngwaọrụ ahụ bụ ihe mmetụ ihuenyo mmetụ aka, nke nwere ike ịchekwa ihe ruru ụdị uwe 99, akpa akpa, akara na ịkpakọba ihe maka nhọrọ dị mfe. Njirimara akụrụngwa ① Ezubere igwe anyị ...
Ọrụ akụrụngwa ①. Ngwaọrụ a nwere ụdịdị FT-M112A bụ isi, nke enwere ike iji tụgharịa uwe aka ekpe na aka nri otu ugboro, tụgharịa ogologo oge otu ma ọ bụ ugboro abụọ, na-enye akpa rọba akpaka na akpaaka. . Enwere ike ịgbakwunye akụkụ arụ ọrụ dị ka ndị a: akụrụngwa akara akpaaka na -akpaghị aka, akụrụngwa na -akpachi akpaaka akụrụngwa, ngwongwo akpaka nwere ike jikọta ya dịka ihe achọrọ si dị. . Akụkụ nke ọ bụla nke Equ ...
Okwu Mmalite Ngwa Ahịa igwe, nke a na -akpọkarị eriri eriri, bụ iji teepu eriri ngwaahịa ma ọ bụ katọn nkwakọ ngwaahịa, wee mechie ma tụgharịa nsọtụ abụọ nke ngwaahịa eriri nkwakọ ngwaahịa site na mmetụta ọkụ nke igwe. Ọrụ nke igwe ịkpa akwa bụ ime ka eriri plastik dị nso n'elu ngwugwu agbakwunyere, iji hụ na ngwugwu ahụ agbasaghị na njem na nchekwa n'ihi na ngwugwu adịghị ike, n'otu oge ahụ ...
Automatic gburugburu karama igwe
Nkọwa ngwaahịa: Ebe nke si: Aha akara China: Asambodo UBL: CE. SGS, ISO9001: Nọmba Model 2015: UBL-T-400 Ịkwụ Ụgwọ & Usoro Mbupu: Obere Iwu Ọnụ: 1 Ọnụahịa: Nkwakọba ngwugwu adịghị: Oge nnyefe osisi: 20-25 ụbọchị ọrụ Ụgwọ ịkwụ ụgwọ: Western Union, T/T, MoneyGram Ikike ọkọnọ: 25 Tọọ kwa ọnwa Nka nka na ụzụ igwe akpaaka karama ụdịdị UBL-T-400 Label Quantity Otu akara n'otu oge izizi ± 1mm ​​Speed ​​30 ~ 200pcs/min Label s ...
Igwe akara akpa kaadị
Njirimara nke Ọrụ: ịdozi kaadị akwụrụ: nhazi ọkwa dị elu - a na -eji teknụzụ mkpịsị aka ukwu mee ihe maka ịdepụta kaadị; ọnụego nhazi dị elu karịa usoro nhazi kaadị nkịtị; Nhazi na ịdebanye aha kaadị dị ngwa: maka akara akara koodu na okwu ọgwụ, ọsọ mmepụta nwere ike iru akụkọ/nkeji ma ọ bụ karịa 200; Ohere sara mbara: nkwado ịkpọ aha n'ụdị kaadị niile, mpempe akwụkwọ, na katọn ndị a na -emeghere; Ezi akara akara dị larịị: a na -eji wheel ịnagide ...
Igwe akpado akpado akpaaka akpaaka
Ihe: igwe anaghị agba nchara akpaaka GRADE: ntuziaka na -arụ ọrụ ntuziaka: ± 0.5mm APPLICABLE: Wine, Beverage, Can, Jar, Medical Bottle Etc USAGE: Adhesive Semi Automatic Labeling Machine POWER: 220v/50HZ Basic Application Function Function: A na -eji ya n'ọtụtụ waya. , ogwe osisi, ọkpọ plastik, jelii, lollipop, ngaji, efere a ga -atụfu, na ihe ndị ọzọ. Gbanye akara ahụ. Ọ nwere ike ịbụ akara oghere ụgbọelu. Nka na ụzụ oke UBL-T-107 Labeling Accuracy ± 0.5mm La ...
Nkowa dị mkpirikpi ：
Huan Lian —— igwe na -edenye aha ya na onye na -eweta ngwọta ngwugwu nwere ọgụgụ isi!
Dongguan Huan Lian Automation Equipment Co., Ltd. emi odude ke ọwọrọetop n'ichepụta obodo China-Dongguan City.Is a collection of technology nnyocha na mmepe, mmepụta, ahịa, ọrụ dị ka otu n'ime elu-tech onwe ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ kpebisiri ike inye onyinye maka “Emere na China 2025 ″. N'ịdabere na isi azụmaahịa nke usoro nrụpụta akpaaka akpaaka nke ụlọ ọrụ nne na nna, ụlọ ọrụ ahụ etolitela otu azụmaahịa dị na mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke obibi akwụkwọ nrapado, igwe kwụ ọtọ, igwe mpempe akwụkwọ akpaka, igwe nkwakọ ngwaahịa uwe nwere ọgụgụ isi na ihe ndị ọzọ.
Ihe omume & ahịa na -egosi
Onye na -enyocha karama biya, Ngwa mbukota akwa, Igwe nyocha akara, Onye na -enyocha karama, Onye na -enyocha karama mmanya, Onye na -enyocha karama,